आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो: के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन् ? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो: के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन् ?
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको अवधि अर्को एक हप्ता थपिएको छ। गृह मन्त्रालयसँगको परामर्शमा उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बुधबारको बैठकले केही सेवालाई सहजीकरण गर्दै अर्को एक साताका लागि अत्यावश्यक र तोकिएबाहेकका गतिविधि रोक्ने गरी निषेधको आदेश जारी गरेको हो।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले रोकथाम गर्न जरुरी रहेको निष्कर्षका साथ पुनः निषेधको आदेश जारी गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताउनुभयो । यसअघि भदौ ३ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी तीनै जिल्लाका प्रजिअसहितको बैठकले एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । उक्त आदेश भदौ १० गते राति १२ बजे सकिएपछि बुधबार राति १२ बजेसम्मका लागि त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिइएको थियो ।
बुधबार रातिदेखि उक्त समय सकिएकाले केही सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी पुनः एक साता निषेधको आदेश थपिएको हो । यही भदौ २४ गते राति १२ बजेसम्म उक्त आदेश कायम रहनेछ । सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) तथा सरकारको निर्देशनबमोजिम आदेश जारी गरिएको हो ।
केके सञ्चालन गर्न पाइन्छ ?